संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न डक्टरसहित घरदैलो अभियानमा ‘माओवादीे केन्द्र’ – Saurahaonline.com
संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न डक्टरसहित घरदैलो अभियानमा ‘माओवादीे केन्द्र’
कोहलपुर : नेकपा माओवादी केन्द्र कोहलपुर नगर कमिटिले सोमबार कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. २ मा द्दरदैलो अभियान संचालन गरेको छ । कोरोना संक्रमितको अवस्था र उनिहरुको समस्याको बारेमा जानकारी लिने उद्धेश्यले संचालन गरीएको अभियानको दोस्रो दिन २ नं. वडाका स्थानियहरुसँग भेटघाट गरीएको हो ।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश कमिटि सदस्य नरेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा चिकित्सक सहित स्थानियहरुको घरदैलोमा पुगेको टोलीले कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ । कोरोनाबाट संक्रमित भएका तथा कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका नगरवासीलाई भेट्ने र उनिहरुको समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यले अभियान संचालन गरीएको माओवादी केन्द्र कोहलपुरले जनाएको छ ।
आईतबारबाट सुरु भएको अभियान अन्तर्गत दोस्रो दिन सोमबार नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका चिकित्सक डा. देवेन्द्र आचार्यले कोरोना संक्रमणका कारण घरमै बसीरहेका वडावासीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका छन । त्यसक्रममा डा. आचार्यले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था चेकजाँच गर्नुका साथै आवश्यक परामर्श समेत दिएको नेकपा माओवादीका युवा नेता न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले कोहलपुर नगरपालिका भित्र कोभिडका कारण कसैलाई समस्या भएमा आफुहरु चिकित्सक सहितको सेवा दिन तयार रहेको बताए ।